Miyaa suurtagal in la soo iibsado backlinks for rikoor heer sare ah oo raqiis ah?
Haa, dhab ahaantii suurtagal maaha inaad dib u soo iibsato qiimo jaban laakiin weli wax ku-ool ah oo sare loogu qaadayo boggaaga internetka. Waxaan loola jeedaa habka ugu wanaagsan ee dib loogu iibsado raqiis ahaan waa inaad adigu sameysid. Dhab ahaan, waxaa jira nidaamyo kala duwan si aad u hesho dib u hagaajin SEO ah ee adduunka maanta ku xiran yahay bulshada. Markaan tixgelineyno in mucjisada casriga ah ee warbaahinta bulshada ay hadda ka sii muhiimsan tahay tan ka hor, waxaan soo jeedinayaa in dib loo celiyo Xiriirka Dadweynaha. Xaqiiqdii, PR wuxuu ciyaarayaa door muhiim ah oo ah in la wanaajiyo tamarta raadinta lafteeda, iyada oo la jaan qaadaya qiime ka badan taas oo aasaas fiican u leh xarun kasta oo ganacsi magac leh - win a day casino bonus code 2018. Wali miyaad weli yaaban tahay in aad dib u soo iibsato qiimo jaban ama aad tayad sare u qaadato dhammaan qiimaha? Waa kuwan dhowr ka mid ah hababka ugu caansan ee RP si ay u kasbadaan naftooda iyo adigoon wax lacag ah bixin.
Ka hor inta aanad wax kale jirin, waa inaad isku daydaa inaad ka warhesho qaar ka mid ah boggaga internetka ama kuwa saamaynta ugu leh ganacsigaaga ama niche market. Waxaan loola jeedaa in aan iska dhicin xiriirka dadweynaha ee internetka. Xaqiiqdii, ka shaqaynta PR wuxuu had iyo jeer ka faa'iideysanayaa hagaajinta muuqaalka internet-ka ee bogga internetka. Sidan, boggaga ganacsigaaga waxaa lagu qori karaa natiijooyinka raadinta ee habboon inta badan, iyada oo la raacayo xoojinta gaadiidkaaga gudbinta waqti isku mid ah. Oo waa inaad waqti ku maalgelisaa warbaahinta bulshada, sida markaad ficil-celiso adiga oo aanad u baahnayn inaad si toos ah u bixisid boggaaga internetka oo aad rajeyneyso in qof lagu qabto. Dabcan, habka firfircooni uma shaqeynayo. Dhamaanteen waan ognahay taas. Taasi waa sababta aad u heshay macluumaadkaaga oo la adeegsanayo dib-u-celin PR oo laga helayo bogag kasta oo la xidhiidha hay'adda ugu sarreysa, ama qaar ka mid ah saamileyda firfircoon ee firfircoon si ay u hoggaansamaan wacyi gelinta dadweynaha iyo magac caan ah ee ganacsigaaga.
Wax kasta oo shey ama adeeg ah ee aad ka shaqeyneyso, tixgelineyso inaad eegto wax kasta oo ku haboon ganacsigaaga ama suuqa. Ku noqo khabiir ku ah xirfadlahaaga, lana wadaagno waayo-aragnimadaada xirfadeed iyo ra'yigaaga. Xusuusnow, dib u eegista wax soo saarka marwalba waa la daabacaa iyadoo dib loo eegayo qoraaga ama boggiisa intiisa badan.
Ka qayb qaadashada mid aad u caan ah ama xitaa yar yar oo blog ah oo leh soo dhajinta martida ayaa ka mid ah hababka ugu fiican ee inaad dib u heshid tayada, halkii aad ka fikiri lahayd inaad dib u iibsato qiimo jaban. Sidaa darteed, ha ka waaban inaad ku maal gashato wakhti yar oo qoraal ah oo tayo sare leh oo aad u tagto martida martida. Dhamaan waxaad u baahan tahay waa inaad soo baxdid oo aad aragto dhagaystayaasha muhiimka ah. Kaliya diiradda saara ugu fiicnaanshaha kalsoonida iyo tixgelinta ilaha saddexaad ee aad doonayso inaad wax ka qabato - oo aad haysato wax kasta oo aad ku heshiisay. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, isticmaalkaaga ku celcelinta marar badan ee martida martida ee dhowr goobood waxay had iyo jeer ka dhigtaa ganaaxa rikoodhka ah Google, ama ugu yaraan burburin horumarka dhismaha hadda jira ee aad ka shaqeysay si adag.
Dhammaan, waxaad sidoo kale ka fekereysaa inaad kaqaybqaadato wada-hadal kasta oo dadwaynaha, tusaale ahaan qabashada su'aalaha & Jawaabaha qaybta, ama xoojinta nuxurka aragga la wadaago (sida muuqaalka sawirada indhaha ama feylka sawir-qaadashada) si aad u wado xiiso dheeraad ah iyo ka qaybqaadashada, iyada oo ay ku soo laabanayaan tayada dib u celinta.